भुलेर पनि नर्गुहोस् यी ४ गल्ती, नत्र किड्निमा हुनसक्छ पत्थरीको समस्या ! – Sandesh Press
August 17, 2021 226
काठमाडौँ । मृगौलाले हाम्रो शरीरमा रगत शुद्धिकरण गर्छ । तर, हाम्रा केही गल्ती र लापरवाहीका कारणले मृगौलामा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । मृगौलाको जोडी पिठ्यूँको मध्यभागमा करङको ठीक मुनी हुन्छ । यिनीहरुको आकार हाम्रो मुठ्ठी बराबर हुन्छ र यो हेर्दा राजमा जस्तो देखिन्छ ।
किड्निको पत्थरी हुँदा तपाईंको पेट, पिठड्युँ वा कम्मरमा असाध्यै पीडा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यो तब हुन्छ जब तपाईको पत्थर सर्न थाल्छ र किड्निमा दबाब दिने संकीर्ण पिसाब नलीमा गएर अड्किने गर्दछ ।
गर्मीको समयमा तपाईंले ३ देखि ४ लिटर पानी पिउनु पर्छ। गर्मीमा, मानिसहरू प्रायस् धेरै पानी पिउँछन्, तर जाडोमा, मानिसहरूले पानी पिउँदैनन् वा थोरै पनि पिउने गर्दछन् । जब शरीरमा पर्याप्त पानी हुँदैन तब, मिर्गौला राम्रोसँग सफा हुने गर्दैन ।
यस्तो अवस्थामा तपाईले खानुभएको खाना राम्रोसँग पच्दैन र मिर्गौलामा जम्मा हुन थाल्छ, जुन पछि गएर पत्थरीको समस्यामा बदलिन्छ । दैनिक खानाको ख्याल गरेर, तपाईं एक हदसम्म किडनी स्टोनको जोखिमलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ।
१.थाहा भएकै हो, खराब खानपानको कारण पनि पत्थरी हुन्छ । त्यसैले हल्का, सुपाच्य र पोषणले भरपुर खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ।
२.शरीरमा कहिले पनि पानीको अभाव हुन दिनु हुँदैन । दिनभर समय समयमा पानी पिउनुपर्छ । जुस, सुपको सेवन गर्न सकिन्छ। यद्यपी चिया, मदिरा, सोडा, कफीको सेवन हानिकारक हुनसक्छ ।
३.मूत्राशयको पत्थरीको घरेलु उपचार गर्ने हो भने, रोगीलाई केहि दिनसम्म कागती पानी, सुन्तलाको जुस, अधिक पानी पिउनुपर्छ।
पत्थरी भएका व्यक्तिले नखानुहोस् यस्ता खानेकुराहरु
क्यालसियम फस्फेट पत्थरीमा के नखाने ?
१.माछा, मासु अण्डा जस्ता जङ्गम खाद्यः प्राणी बाट प्राप्त खानेकुराहरूमा उच्च मात्रामा फस्फोरस पाईन्छ। खाएको फस्फोरस रगत हुदै पिसापमा उत्सर्जित हुदै गर्दा क्यालसियमसंग प्रतिक्रिया गरेर क्यालसियम फस्फेटको क्रिष्टल बनाउने गर्दछ।
५.चर्को नुनको सेवनः उचच मात्रामा नूनको सेवन गर्ने गर्दा यसले पिसापलाई बाक्लो बनाउने हुँदा क्यालसियम र फस्फोरसलाई प्रतिक्रिया गर्ने प्रबल सम्भावना बढाईदिन्छ।
यूरिक एसिड पत्थरी हुँदा के नखानेर ?
सिष्टिन पत्थरी हुँदा के नखाने ?
प्रोटिन बनाउन प्रयूक्त हुने सिष्टिन एमाईनो एसिडको रक्त मात्रा ज्यादा भएर पिसापमा उत्सर्जित भएर बन्ने सिष्टिन पत्थरी अन्य पत्थरी भन्दा आकारमा ठूलो हुने गर्दछ र एक पछि अर्को बनी रहने गर्दछ। यस किसिमको पत्थरीको मुख्य कारण सिष्टिन्यूरीया भन्ने आनुबंशीक रोग हो।यद्यपि खानेकुराहरूको पनि सिष्टिन पत्थरी गराउनमा विशेष भूमीका हुन्छ।
माछा, मासु, अण्डा, दुध, दही, चीज, पनिर जस्ता जङ्गम श्रोतका खानेकुराले यस किसिमको पत्थरी गराउनलाई सहयोग गर्दछ। यसैगरि अत्याधिक नुन हालिएका खानेकुराहरू जस्तै फ्रे¸फ्राई, आलु चिप्स, ससेज, पुरानो अचार आदिको सेवनले पनि सिष्टिन्यूरीयालाई बढाउदछ।
Prevपेट पुट्ट बाहिर निस्किएर लज्जित हुनुहुन्छ ? बिहान उठ्नेबित्तिकै गर्नुहोस् मात्र यी काम !